Mookaite Jasper nke Mooka Creek, Australia - Vidiyo
Zụta eke mookaite na ụlọ ahịa anyị
Kristal nke Mookaite Jasper na-apụta n'ọtụtụ ụdị dịka Mookite, Moakite, Moukite, Mookalite, Mookerite, Mook ma ọ bụ Mook Jasper, dịka Mooku Creek, bụ ndị mepụtara nkume a, Mookaite bụ ụdị dịgasị iche.
Enwere ike ịme Mookaite dị ka cherts, opalite na chalcedony. Nkọwa ya na-adabere kpamkpam ego silica, nke dị na ihe ahụ. Ịka nká bụ otu n'ime ngwaahịa ọgwụgwọ kachasị mkpa nke nkume Mookaite.
Mookaite bu nkume nke ike, na ime mkpebi.
N’Australia, a na-ewere mookaite dị ka nkume na-agwọ ọrịa nke na-enye ike. E kwuru na ọ na-echebe onye nwe ya pụọ ​​n'ọnọdụ ndị siri ike ma jikọọ anyị na ndị anyị hụrụ n'anya nwụrụ anwụ. Ekwenyere na ọ na-eme ka anyị banye na "ebe a na ugbu a," na-enyere aka nyocha nsogbu na mkpebi.
A na-ejikarị Mookaite eme ihe banyere ọrịa glandular ma ọ bụ ime afo, hernias, ruptures na njigide mmiri, na ndị na-eme yoga na-eji ya eme ihe na imeghe nke mbụ, nke abụọ na nke atọ
Mookaite, si Australia